Sahaminta The Best daahfurtay Iyadoo College asxaabtiisa | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sahaminta The Best daahfurtay Iyadoo College asxaabtiisa
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 25/12/2020)
Marka safarka ee shirkadda oo ah saaxiibada college, waa si fiican u caadi in aan leeyihiin faahfaahin ah oo xaq ugu noqon lama filaan ah. Uunana socod meel aan lahayn laga filayo ama qorshaynta kasta oo ka hor si dhab ah waa sida ugu fiican ee ay ogaadeen khasnadihiisii ​​qarsoonaa. Waxaa ka baxo qolka ku filan oo xiiso leh iyo sahaminta dhibqabayaashooda. Sidaas, xagee ka bilowdaan adiga iyo asxaabtaada marka aad rabto inaad sameyso daahfurnaan dhab ah adigoon haysan liis adag oo aad ku sameyso? Sida aad guriga ka maqan ka heli kartaa daahfurtay ugu fiican? Maxay yihiin xulashooyinkaagu?
Well, nasiib kuu, hadda waa suurto gal in la sameeyo been abuur ah Boos duulimaadka fiiso oo aan haysan si lacagta tigidhka diyaarada ama faahfaahin safarka. Si aad u ogolaanaya in safarka aan faahfaahin ah. Ka sokow in, technology ayaa khariidado iyo DKMG ah si fudud loo heli karo, si aad si buuxda ku kalsoonaan kartaa telefoonka Talooyin safarka. halkan waxaa ku qoran 5 Talooyin dheeraad ah oo Sahamin ku daahfurtay ugu wanaagsan ee la asxaabtiisa college:
1. Ku soo biir safar socod bilaash ah
Goobidda iyo diiwaan tours socodka oo lacag la'aan ah maalintii koowaad ee magaalada cusub. Waxay aad si fudud u heli – weydii kaliya xubnaha shaqaalaha ee hotel aad doonaa in la faqri habeenkii ugu horeysay ee, ama wax weyddii ka safra arday kale oo aad ka heli in aad hostel. Baadhitaan deg deg ah oo laga helo internetka ayaa sidoo kale kaa caawin doonta inaad hesho wanaag safar socod bilaash ah. Ogow in inkastoo tours waa horrayn oo lacag la'aan ah, waxaa ugufiican inaad meel dhigatid miisaaniyad yar oo loogu talagalay tilmaamaha hagayaasha dalxiis.
Sidee tours free socodka shuqul qaban? Waxaad ka heli safar socod xor ah oo aan taariikhda iyo waqtiga marka aad la heli doonaa, aad saxiixdo, dhibic kulan ah loo gaadhsiiyo si aad u, aad muujiyaan ilaa barta in waqtiga, ka dibna aad ka tagto wax kasta oo kale in ay hage dalxiis ah. The guide safar burjiga caawin doono inaad ogaato magaalada iyo duleedka ay si fudud u helaan faham qoto dheer ah ee magaalada naqshadaha u gaar ah iyo dhaqanka maxalliga ah.
2. Nafsadaada u ogolaato inaad Lost
Hadda oo ah hage khibrad safar ayaa ka caawiyay aad aragto qaybo badan oo magaalada, waxaa hadda waa wakhtigii si ay u helaan off at a Idaacadda random iyo sahamin xeeran on adiga kuu gaar ah. Si ula kac ah looga fogaado goobaha touristy iyo "lumaan" ee badda ku jira dadka. Oo maxaa yeelay, waxaad tahay saaxiibo, Qasab ma aha in aad walwasho aad u badan oo ku saabsan ammaanka qof ahaaneed. Waxaad ogaan doontaa inay xad-dhaaf ah GEMS qarsoon – wax dalxiis ninna weligii arag. Waxay kaa caawin doona haddii aad u furan yihiin ka hadalka in shisheeyaha, waayo, ninna ma caawin doono inaad ka fiican tahay dadka deegaanka magaalo ogaado.
3. Adeegso Khariidadaha Google
Khariidadaha Google ama Khariidadaha Apple waa hagaag, in kasta oo Apple aysan ka badin karin saadaalinteeda iyo saxnaanta ay khariidadaha Google leeyihiin. Waxaa laga yaabaa in ay tahay sababta oo ah inta badan dadka isticmaala internet ayaa qalabka Android ku shaqeeya, sidaas ugu dalxiis dib u eegista la sameeyo on Google maps. Waxbarashada map Google shuqulladiisa meel fiican for safarka group – Waa fikrad fiican waxa aad hareeraha a. dib u eegista Google kuu sheegi doonaa meelaha ugu wanaagsan in la cuno, meesha laga helayo khamri fiican, oo aad digniin ku saabsan halka aan si ay u booqdaan sida socotada kulliyad. Macluumaadkan waxaa kaa caawinaysaa in aad sahaminta iyo soo saarid dheeraad ah.
4. Ka qaybgal Dhacdooyinka Local
Haddii aadan rabin in ay ku wareegaan waddooyinka oo aan ujeeddo cayiman, sababta ma dhigtaan dhacdo degaanka ka dibna? Weydii agagaarka waayo, carwooyinka ganacsiga, bandhigyada farshaxanka, riwaayada, ama ciidaha iyo naftaada quusin in kasta oo iyaga ka mid ah. Haddii aad jecelahay ciyaaraha, tag garoon ama aad ka qeybgasho ciyaar kubbadda cagta ah. xataa iyadoo dadka deegaanka oo aad ka ciyaari karaan haddii ay ku filan oo soo dhawayn. Tani waxay ku siin doonaa aragti qoto dheer oo magaalada ayna u oggolaadaan in aad si ay ula falgalaan dadka deegaanka iyo la kulmaan halganka iyo farxadaha maalmeedkooda – sida maxalliga ah a. Orod marathon ah haddii aad ku kalsoon tahay awood orodka aad. Tartanka kula haweenkiinna u xiiso ka sii dhigi doonaa.
5. Marsiin Social Media
dib u eegista Facebook kuu sheegi doonaa halka uu aadayo backpacking saaxiibada college, waxa in la ogaado halka ay jiraan, iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato caga in. Kusoo biir koolejka kooxda safarka ee aad dooratay, odhan on Facebook, iyo soo qaado maskaxda xubnaha aqoon. Warbaahinta bulshada waa laga qodo dahabka ururinayo macluumaadka muhiimka ah ee dadka leh waayo-aragnimo waaqiciga ee gobolka a siiyey.
Si aad u soo gabagabeyn, Maalin kasta waa fursad waxbarasho ee koox kasta oo ka mid ah dadka safarka ah dhallinyarada hami college. Just leeyihiin qorshaynta sax ah si aad u caafimaadka iyo safarka caymiska, laakiin naftaada ha ku ekeyn socdaal go'an. Ha dhallinyarada is cajiib ah loo baadho, ogaan iyo haddii aad jeclaan our article, markaas dalban tigidhada tareenka aad ka Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Sahaminta The Best daahfurtay Iyadoo College asxaabtiisa” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
College CollegeMates Discoveries safarka Travelingtips
I am a business analyst, and a financial instructor who has been researching self-development for the past two years and now is off travelling the world. I am also a marathon runner and have set running the Great Wall Marathon as a lifetime goal! My life mission is to inspire others to live their dreams. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir